A na-ejikarị VPSA Oxygen Generator mee ihe na mmepụta oxygen, yana nke ihe na-afụ ọkụ, mgbapụta mgbapụta, ngwa nju oyi, usoro mgbasa ozi, tank buffer oxygen na usoro njikwa. Ọ na-ezo aka na nhọrọ adsorption nke nitrogen, carbon dioxide, mmiri na adịghị ọcha ndị ọzọ site na ikuku na VPSA molekul pụrụ iche, na molekụla sieve na-desorbed iji nweta elu ịdị ọcha oxygen okirikiri n'okpuru agụụ.
Ngwakọta nke Osisi Oxygen Generator PSA
Ntọala nchacha ikuku agbakwunyere
The ikuku abịakọrọ site ikuku Compressor na-asọba n'ime ọcha set, na ọtụtụ n'ime mmanụ, mmiri na uzuzu na-ewepụ site pipeline nyo, wee wepụ ọzọ site na friza draya na mma nzacha, n'ikpeazụ, ultra mma nzacha ga-aga n'ihu. nke miri emi ọcha. Dị ka ọnọdụ ọrụ nke usoro ahụ si dị, a na-emepụta ihe nhazi nke ikuku ikuku na-ekpo ọkụ na-eme ka ọ bụrụ nke ọma iji gbochie ịbanye n'ime mmanụ achọpụtara ma nye nchebe zuru oke maka sieve molecular. Nhazi siri ike nke nhazi nchacha ikuku na-eme ka ndụ ọrụ nke sieve molecular rụọ ọrụ. Enwere ike iji ikuku dị ọcha mee ihe maka ikuku akụrụngwa.
Osisi PSA Oxygen Generator Pharmaceutical
Usoro PSA Oxygen Generator Plant
Dị ka ụkpụrụ nke pressurized adsorption, depressurization na desorption, na PSA oxygen generator osisi bụ akpaka ngwá na-eji zeolite molekụla sieve dị ka adsorbent ka adsorb na hapụ oxygen si ikuku. Zeolite molecular sieve bụ ihe na-acha ọcha granular adsorbent nwere micropores n'elu na n'ime. Njirimara micropores na-enyere aka mee ka nkewa nke O2 na N2. The kinetic diameters nke gas abụọ dịtụ iche. Mkpụrụ ndụ N2 nwere ọnụego mgbasa ngwa ngwa na micropores nke zeolite molecular sieve, na ụmụ irighiri ihe O2 nwere ọnụego mgbasa nwayọ nwayọ. Mgbasa mmiri na CO2 na ikuku abịakọrọ yiri nitrogen. N'ikpeazụ, a na-eme ka ụmụ irighiri oxygen si na ụlọ elu adsorption.
Ọkụ PSA Oxygen Generator Metallurgy
Ụkpụrụ PSA Oxygen Generator Plant
Enwere 21% oxygen na ikuku. Ụkpụrụ nke osisi na-emepụta oxygen na PSA bụ iji usoro anụ ahụ wepụ oxygen na ntinye dị elu site na ikuku. Ya mere, ngwaahịa ikuku oxygen agaghị ejikọta ya na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ, na ikuku oxygen na-adabere na ikuku dị mma ma dị mma karịa ikuku.
Ihe ndị bụ isi nke ụlọ ọrụ oxygen generator PSA bụ: ike oriri na mmepụta oxygen, na mmepụta oxygen na-egosipụtakarị site na mmepụta ikuku oxygen na ntinye uche. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị dị mkpa na-agụnye: nrụgide ọrụ nke ụlọ ọrụ oxygen generator PSA na nrụgide nke ọdụ ụgbọ mmiri mmepụta oxygen.
Ime akwụkwọ PSA Oxygen Generator Plant
Okwu Mmalite nke PSA Oxygen Generator Plant
Oxygen generator bụ akụrụngwa nke na-eji ikuku dị ka akụrụngwa na-emepụta oxygen, na ikuku oxygen nwere ike iru 95%, nke nwere ike dochie oxygen bottled. Ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ oxygen generator na-eji teknụzụ PSA eme ihe. Dabere na ihe dị iche iche condensation nke dị iche iche dị na ikuku, mpikota onu ikuku na elu njupụta kewapụ gas na mmiri mmiri, mgbe distillation iji nweta oxygen. A na-emepụta nnukwu akụrụngwa nkewa ikuku ka ọ dị elu, nke mere na ikuku oxygen, nitrogen na gas ndị ọzọ nwere ike dochie okpomọkụ zuru oke ma mezie na usoro ịrịgo na ọdịda. The dum usoro mejupụtara abịakọrọ ikuku ọcha mgbakọ, ikuku nchekwa tank, oxygen na nitrogen nkewa ngwaọrụ na oxygen nchekwa tank.
Psa Nitrogen osisi, Hydrogen na Oxygen Generator, Holtec Nitrogen Generator, Atlas Copco Ngp, Ọgbọ ike hydrogen, Psa Nitrogen,